Raadinta Hore 2050 Survey
Raadinta Hore 2050
Gaadiidku waa muhiim. Baaskiil wadista, socodka, raacitaanka baska, iyo wadista baabuurta waxay naga caawinayaan inaan gaadhno meesha aan u baahan nahay.Laakiin waxa ku saabsan mustaqbalka? Naga caawi HALKA HORE HALKA 2050.
Laga bilaabo hadda ilaa Sebtember 10, Ururka Qorsheynta Aagga ee Saint Cloud (APO) wuxuu kaa codsanayaa inaad la wadaagto sheekadaada gaadiidka. Maxaa si fiican u shaqeynaya hadda? Waa maxay wax aan xaqiiqdii u baahanahay inaan ka shaqeyno si aan u horumarino khibradaada gaadiidka hadda iyo mustaqbalka labadaba (ka fikir sanadka 20 ee soo socda)?
Waxaan dooneynaa inaan kaa maqalno waxa u baahan in laga beddelo gaadiidka mustaqbalka.
Jawaabahaagu waxay naga caawin doonaan inaan dhisno aragti gaadiid oo ah halka loo baahan yahay in loo jiheysto aagga Saint Cloud sannadka 2050. Aragtidani waxay hagi doontaa horumarka APO ee muddada dheer, qorshaha gaadiidka dusha sare ee qaababka kala duwan (Qorshaha Gaadiidka Metropolitan)
* 1. Maxaad u malaynaysaa inay u baahan tahay in laga beddelo gaadiidka?
* 2. Haddii aad jeceshahay in lagugula socodsiiyo Raadinta Hore 2050, Qorshaha Gaadiidka Magaalo-madaxda APO (MTP), ama howlaha kale ee qorshaynta APO, fadlan ku qor emaylkaaga hoosta. APO MA Iibiso ama siiso macluumaadkaaga shaqsiyeed cid kale, weligeed.
Su'aalaha soo socdaa waa XUL, laakiin dhammeystiristooda ayaa naga caawin doonta inaan fahamno haddii aan gaarno dhammaan qaybaha bulshada.
* 3. Waa maxay jinsigaagu?
labeeb ama Mid kale.
* 4. Magaaladee ayaad degan tahay?
Other (fadlan sheeg).
* 5. Waa maxay da'daadu?
* 6. Qabiilkee ayaad ku aqoonsan tahay? Xulo dhammaan inta ku habboon.
Caddaan ama Caucasian.
Black ama Afrikaan Mareykan ah.
Isbaanishka ama Laatiinka.
Aasiyaan ama Aasiyaan Mareykan ah.
Hindida Mareykanka ama Dhaladka Alaska.
Hawaayiga ama Jasiiradaha Baasifigga ah.
Mid kale (fadlan sheeg).
* 7. Immisa qof ayaa ku nool gurigaaga?
* 8. Waa maxay wadarta dakhliga qoyskaaga sanadkii hore?
Ka hooseeya $ 10,000.
Inta u dhexeysa $ 10,001 iyo $ 25,000.
Inta u dhexeysa $ 25,001 iyo $ 50,000.
Inta udhaxeysa $ 50,001 iyo $ 75,000.
* 9. Ma leedahay naafonimo jireed?
* 10. Xageed ku dhalatay?
Dibadda Dawladda Mareykanka.
* 11. Waa maxay luqadda koowaad ee looga hadlo gurigaaga?
Wax aan Ingiriis ahayn (fadlan sheeg).